विकराल बन्दै स्वमरण « Online Rapti
दाङ, २० असार : दाङमा तुलसीपुरकी एक युवतीले दुई दिन पहिले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक ‘लाइभ’ गरेर स्वमरण गरिन् । तुलसीपुर–५ की २३ वर्षिय एलिशा गौतमले स्वमरणमा यस्तो हर्कत गरेकी हुन् । मध्यरातमा फेसबुकमा लाईभ गरेर आफ्नै कोठाभित्र उनले आत्महत्या गरेको दृष्य अहिले भाइरल बनेको छ ।
यस्ता घटनाहरूलाई कम गर्नका लागि सर्वप्रथम परिवार र समुदायस्तरमा सामाजिक सचेतना फैलाउन जरूरी रहेको उनले बताए । आफ्ना समस्यालाई कसरी भन्ने ? कसलाई भन्ने ? कहाँ जाने ? कुन समस्यालाई कसरी भन्ने ?समुदायमा जनसचेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी बढ्दो आत्महत्याका घटनाहरूलाई कम गर्न सकिने ५ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता राजकुमार बैदवारले बताए ।
मानसिक तनाव, लामो समयसम्मको प्रेम सम्बन्ध, सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग, मादकपदार्थ, लागूऔषध सेवन, जबरजस्ती करणी, नैरास्यता, पारिवारिक कलहलगायतका कारणले आत्महत्या हुने गरेको उनले बताए । प्रदेश नम्बर ५ मा आत्महत्या गर्नेहरूको संख्या सबैभन्दा धेरै छ । यस्ता घटनाहरू न्यूनीकरणका लागि स्थानीय सरकारले समुदायमा सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिन्छ । यो समाचार प्रदेश टुडे राष्ट्रिय दैनिकमा उमा भण्डारीले लेखेकि छन् ।